တရုတ်ရေကူးကန်အပူ Pump, မြေပြင်ရင်းမြစ်အပူ Pump, အင်ဗာအပူ Pump, Air ကိုရန်ရေအပူ Pump ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်း
Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD. [Guangdong,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား:Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Africa , Asia , East Europe , Europe , Middle East , North Europe , Other Markets , West Europe ထုတ်ကုန်:91% - 100% Cert:ISO9001, CB, CCC, CE, EMC, SSA ဖေါ်ပြချက်:ရေကူးကန်အပူ Pump,မြေပြင်ရင်းမြစ်အပူ Pump ရာပူဇော်သက္ကာကို အင်ဗာတာအပူ Pump ထုတ်လုပ်သူ / ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, စသည်တို့ကို
Ltd. , ဂွမ်ဒေါင်း Shunde OSB ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်, 1999 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Shunde Foshan တွင်တည်ရှိသည်, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးကြွယ်ဝအတွေ့အကြုံနှင့်အတူနဲ့ရေအပူစုပ်စက်ထုတ်ကုန်လေကြောင်းတင်ပို့ခြင်း, အတွက်ရရှိနိုင်သောဝန်ဆောင်မှုနှင့်အများဆုံးတောင်းဆိုမှုများထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးပေးအပျနှံခဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်စျေးကွက်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်များကိုအညီ OEM & လိမ္မော်ရောင်ဝန်ဆောင်မှုပေး။ ယခုမှတက်, ငါတို့သည်,3အော်တိုထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သော 4-In-1 လျှပ်စစ်မီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစစ်ဆေးရေးစက်နှင့်ဟေလိုဂျင်အဖြစ်အပြည့်အဝရေခဲသေတ္တာ Auto-refilling စက်အဖြစ်အားလုံးလိုအပ်သောစမ်းသပ်ကိရိယာများ,3အအေး / ပူအခွအေနေ enthalpy စမ်းသပ်ခြင်းဓာတ်ခွဲခန်းတပ်ဆင်ထားကြပါပြီ 2015system: စက်, စတာတွေအားလုံးစီမံခန့်ခွဲမှုစစ်ဆေးနေယိုစိမ့်က ISO 9001 တွင်အောက်ပါတို့ကကွပ်မျက်နေကြသည်။ အပူစုပ်စက်ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်နှင့်မြောက်အမေရိက, ဥရောပ, တောင်အာဖရိကနှင့်အာရှမှထောက်ပံ့ခဲ့ကြထုတ်ကုန်ကောင်းစွာစျေးကွက်ကလက်ခံကြသည်နှင့်ကျွန်တော်အီးဖြတ်သန်းနေဖြင့်ပိုပြီးအောင်မြင်မှုအောင်မြင်ပြီ, သမဝါယမ, SGS မြောက်အမေရိက CUS လက်မှတ်နှင့် TUV EN 14511, EN16147, EN14825 စသည်တို့စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကိုစမ်းသပ်။ အဖြစ်ကိုယ့်အားလုံးနီးပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့လေထု၏ရေအပူစုပ်စက်ထုတ်ကုန်အတွက်သက်ဆိုင် IOT Wi-Fi ထိန်းချုပ်မှု function ကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အကြှနျုပျတို့သညျကိုအကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို join နှင့်ငါတို့နှင့်အတူမိတ်ဖက်ဖြစ်ကြိုဆိုပါတယ်, တီထွင်, ယှဉ်ပြိုင်!
DC ကအင်ဗာတာအပူ Pump အပူပြန်လည်ထူထောင်ရေး Chiller
ထုတ်လုပ်မှုဖော်ပြချက်: ၁။ အပူပေးစက်နှင့်အပူပေးစနစ်၊ အအေးမှ ၁၀ ဒီဂရီ၊ ရေ ၃၅ ​​ဒီဂရီအထိရေအေး။ ၂။ အင်ဗာတာအပူစုပ်စက်သည်အင်ဗာတာနည်းပညာ၊ စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်သည်။ 3. Built-in အပူပြန်လည်နာလန်ထူ function ကိုအတူပန်းကန် heat exchanger, ပြည်တွင်းရေနွေးအပူချိန် ၆၀ ဒီဂရီအထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ ၃။...
ကုန်ပစ္စည်းဖော်ပြချက် : ၁။ ရေကိုရေခဲခြင်းမှကာကွယ်ရန်လျင်မြန်သောရေနုတ်မြောင်းဒီဇိုင်း။ 2. အပူချိန်နိမ့်နိမ့်အပူစုပ်စက်သည် -25 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်တွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်။ 3. လေအရင်းအမြစ်အပူစုပ်စက်အငွေ့ပျံအောက်မှာအောက်ခြေအပူခါးပတ်ရှိပါတယ်။ 4. EVI အနိမ့်ပတ်ဝန်းကျင်အပူစုပ်စက် crankcase...
ကုန်ပစ္စည်းအကြောင်းအရာ: 1. R410a / R407c ရေခဲသေတ္တာ Multi Function Heat Pump ။ ၂။ Floor Heat Pump သည်ကွန်ပျူတာ (သို့) လက်ကိုင်ဖုန်းဖြင့်အဝေးမှထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ၃။ အနိမ့်ဆုံးအပူချိန်က ၈ ဒီဂရီနဲ့အမြင့်ဆုံးအထိရှိတယ် ရေပူအပူချိန် 50 ဒီဂရီအဖြစ်မြင့်မားသည်။ အအေး / နှစ်မျိုးလုံး။...
လိပ်စာ:NO.2, Miaokeng Industrial Zone, Shaxu, Jinsha Avenue, Daliang, Shunde, Foshan, Guangdong
85 Degrees အမြင့် Temp အပူ Pump
ရေအပူစုပ် Air လေကြောင်းလိုင်း ရေကူးကန်အပူ Pump ရေကူး အားလုံးတစ်ဦးကအပူ Pump ခုနှစ်တွင် EVI အပူ Pump 85 Degrees အမြင့် Temp အပူ Pump DC ကအင်ဗာတာအပူစုပ်စက်
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Guangdong Shunde O.S.B. Environmental Technology CO.,LTD. All rights reserved ။ မှပံ့ပိုးသည်
,မြေပြင်ရင်းမြစ်အပူ Pump ရာပူဇော်သက္ကာကို အင်ဗာတာအပူ Pump ထုတ်လုပ်သူ / ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း, စသည်တို့ကို